Golaha ammaanka oo diidey in AMISOM la hoosgeeyo Qaramada Midoobey. – Radio Daljir
Golaha ammaanka oo diidey in AMISOM la hoosgeeyo Qaramada Midoobey.
Luulyo 10, 2016 1:52 b 0
(July 10 2016)-Golaha ammaanka ee qaramada Midoobey ayaa si rasmi ah u qaadacay codsigii dhowaan madaxweynaha dalka Kenya u gudbiyey qaramada Midoobey ee ku aadanaa in howlgalka AMISOM ee Soomaaliya la hoosgeeyo Qaramada Midoobey.
Waxaa qaraar meelmariyey 15 xubnood ee golaha ammaanka iyagoona isku raacay in xaalada Soomaaliya ee haatan aysan ku haboonayn in ciidamo Qaramada Midoobay ka socda la geeyo Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo dhowaan wadanka Belgium-ka kula kulmay xoghayaha guud ee qaramada Midoobey Ban Ki Moon ayaa ka codsaday in AMISOM laga wareejiyo Midowga Africa lana hoosgeeyo qaramada Midoobey.
Howlgalka nabad ilaalinta midowga Africa ee AMISOM ayaa ilaa sanadkii 2007, waxa uu hoos joogey midowga Africa waxaana taageero dhaqaale siiya midowga reer Yurub oo dhowaan dhimay dhaqaalihii ay siin jireen.
DHEGEYSO-Warbixin qaabka ciidan Soomaaliyeed loodhisi karo kahor bixitaanka AMISOM.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Tartan iyo Tacliin oo Wareeg Xiisabadan Galay.